Midowga oo Go'aan Adag ka qaatay Doorashada s iyo RW Rooble (Akhriso War Culus) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Midowga oo Go'aan Adag ka qaatay Doorashada s iyo RW Rooble (Akhriso War Culus) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
“Ma aqbalayno, qaybna ka noqon meyno boobka Doorashada socota oo laguna burburinayo Nabadda iyo dawladnimada.
Golaha Midowga Murashaxiinta ayaa War culus kasoo saaray shir uga socday magaalada Muqdisho intii u dhexaysay 25 -30/11/2021, laasoo ay uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan geeddi-socodka doorashooyinkii la filayey in ay dalka ka qabsoomaan.
Golaha Musharxiinta ayaa sheegay inay caddaatay arrimaha soo socda:
2- In aysan jirin ergo la xulay, la diiwaan geliyey, la tababaray, guddiga doorashooyinka ee heer Federaalna (FIET) ay hubiyeen.
4- In loo diiday diiwaan gelinta tartanka kursiga xildhibaanno kuraasta hore ugu fadhiyey, iyo kuwo kale oo xaq u lahaa, halka la diiwaan geliyey xubno aan soo buuxinin shuruudihii diiwaan gelinta.
5- In ay luntay madaxbannaanidii, iyo dhexdhexaadnimadii guddiyada doorashada heer dawlad goboleed, kuwaasoo toos uga amar qaadanaya Madaxweynaha dawlad-goboleedka, halka guddiga doorashada ee heer federaal ka amar qaataan madaxda federaalka.
6- In guddiyada labada heer aysan kala amar qaadanaynin, Guddiga Xallinta Khilaafaadka uu gabay hawshii loo xilsaaray, isagoo diiday qabashada cabashooyinka, kuwii loo gudbiyeyna aanan u cadaalad falin
Waxay intaas ku dareen mar haddii ay meesha ka baxeen dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada, waxay doorashadii la sugayey isku bedeshay boob qaawan oo dalka u horseedi kara khilaaf siyaasadeed, xasillooni darri, iyo burbur ku yimaada dawladnimada.
Goluhu Midowga Musharixiinta waxya sheegeen inay Raysal wasaare Maxamad Xuseen Rooble ka dalbadeen in la hakiyo doorashooyinka, shirna isugu yeero madaxda Golaha Wadatashiga Qaran, Midowga Murashaxiinta, Bulshada Rayadka ah iyo beesha caalmaka, si wax looga qabto boobka doorashooyinka socda, loona saxo khaldka. Laakiin ay wax laga xumaado tahay in taas bedelkeeda uu Rooble dhiirrageliyey sii socoshada doorashada uu boobkeedu u muuqdo bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba, isagoo ammaan u soo jeediyey madaxdii boobka loo haystay, kana dalbaday kuwa aan weli billaabin in ay degdeg u billaabaan.
Intaas kadib Golaha Midowga Murashaxiinta wuxuu shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalaamkaba u caddaynayaa inuu qaatay Go’aannada soo socda:-
3- In aan la fiirsan karin sida ay wax u socdaaan, sidaas darteedna Goluhu wuxuu watadashi la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada, si loo helo xal qaran oo dalka looga samatabixiyo halista ku soo fool leh xasilloonida, dawladnimada iyo wadajirka ummadda.
6- In beesha caalamka aysan indhaha ka laaban boobka doorashooyinka, fartana ku fiiqaan hufnaan la’aanta doorshada, aysanna sugin cawaaqib xumida ka dhalan karta boobka socda.
Previous articleBoqor Buur-Madow oo Raaligelin iyo Caddeyn ka bixiyey Kaftankii Muranka dhaliyey
Next articleAkhriso: Liiska 16 Kursi ka mida Golaha Shacbaka oo lagu dooranayo Muqdisho iyo xildhibaannada..